सांसदको प्रश्नः हाम्रो देशमा ब्राह्मण, क्षेत्रीको मात्रै अधिकार छ ? | Makalukhabar.com
अमृता देवी अग्रहरी
फागुन २६, काठमाडौँ । सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो देशको सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने के हाम्रो देशमा ब्राह्मण क्षेत्रीको मात्रै अधिकार छ आन्दोलन गरेर आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्ने ? के यो देशमा मधेसी, थारु अनि पहाडमा बसेका जनजाति र दलितहरुको अधिकार छैन ?
म सभामुख महोदयको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, यो देशमा ब्राह्मण क्षेत्री आन्दोलन गरेर देशको शिखरमा बस्ने अनि अन्य जाति आफ्नो हक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्छन् भने, उनीहरुलाई जेलमा पठाउने ? यो कस्तो कानून हो ? कस्तो न्याय हो ? यो सरकारले के चाहिरहेको छ
बाबु बन्न लागेका आर्यनले गर्भवती श्रीमतीसँग खिचाएका केही तस्विरहरु